Abafundi bekhuluma nabavela ku- Advice Desk for the Abused emcimbini weGender Awareness.
Abafundi abenza izifundo zobummeli baqwashise ngezimo ezibandakanywa ukuhlukumezwa nodlame lobulili olubhekene nabafundi abalwenza ngaphansi komcimbi obizwa ngeGender Awareness Programme obubanjelwe esikhungweni saseHowardCollege.
Lomcimbi obuhlelwe ngabafundi abangaphansi komkhakha weLaw and Social Justice (SLSJ) bagqugquzele abafundi ukuthi bakhulume ngokuhlukumezwa.
I-SLSJ bazinikele ekuvikeleni amalungelo abantu, ukuvikela abantu ekuhlukumezeni nokuthuthukisa ukulingana emphakathini. Isekelwa abaluleki besikole sobummeli nabeKolishi lakwaLaw and Management.
Loluhlelo luhehe abafundi abaningi ababe yingxenye yezindlela ezahlukile ekubalwa kuzo abezinkondlo, abaculi nabezokudansa.
Ohola lelithimba uNksz Zia Maharaj uthe isizathu esigqugquzele loluhlelo ukuthi abafundi abaningi babhekana nalezizinkinga zodlame mihla yonke emakhaya nasesikoleni kodwa bayasaba ukuthola usizo.
‘Ngalesikha senza uhlelo lweStreet Law ezikoleni sathola ukuthi iyadingeka indawo lapho abahlumezekile bezokwazi ukukhuluma ngokukhululeka. Inhloso yaloluhle kwakukuthi kube nendawo ephephile yabantu abahlukumezekile nabacwaswayo ukuze bathole jusizo lokuphuma kulesimo ababhekene naso,’ kusho uMaharaj.
Abafundi baphinde bathola ithuba lokukhuluma nokuthola ulwazi kwabamele abanobudlelwano nobulili obufanayo (iDurban Lesbian and Gay Community) nabaveli emnyangweni wabahlukumezekile (iAdvice Desk for the Abused), abebeyindlenye yohlelo.
Udokotela wenqondo ovela eKolishini uNksz Ishara Maharaj uncome abafundi ngokugqugquzela ngaloludaba oluyindaba mlonyeni.
‘Sibonile ukuthi siyankuka isibalo sodlame kubantu abathandanayo kakhulukazi abantu besifazane abancane bayadinga ukukhuthazwa nokuzwelwa ngalezizimo. Bayadinga abafundi ukuthi bafundiswe ngobudlelwano obunempilo nokuthi bazi ukuthi bangaluthola kuphi usizo uma belidinga,’ kusho Ishara Maharaj.